Zvinhu zvishanu hazvibvumirwe muhukama | Bezzia
5 zvinhu zvisingabvumirwe muhukama
Maria Jose Roldan | 06/07/2021 22:00 | Hukama
Mune vaviri kana muhukama, pane zvinhu zvinoverengeka izvo zvisingafanire kutenderwa chero zvodii. Kana izvi zvikaitika, hukama hwacho hunomira kuva hune hutano hwobva hwava chepfu, nehuipi hwese uhwo hunoreva.
Nhengo dzehumwe hukama dzinofanira kugara dzichishanda sechikwata uye tsvaga humwe hukama hwakanaka hunofarira vaviri vakadaro. Muchinyorwa chinotevera tinokuratidza izvo zvisingatombofanirwi kubvumidzwa mukati mevaviri, kudzivirira mamwe matambudziko anogona kuzvipedza.
1 Kumisikidzwa kweshamwari
2 Kupopota uye hasha
3 Kwete nhema
4 Kushaikwa kwekuvanzika uye nerusununguko
5 Kumanikidzwa pabonde
Zvakajairika kuti munhu wega wega anoita mumwe murume nemukadzi vane denderedzwa reshamwari ravanoda kuchengeta. Chii chisingafanirwe kubvumidzwa chero nguva kuti mumwe wemapati ari muhukama, kumanikidza shamwari dzingaone uye dzipi dzisinga. Mumwe nemumwe anofanirwa kuve nerusununguko rwakakwana uye rusununguko kuti akwanise kusangana newaanoda.
Kupopota uye hasha
Kupopota uye kurwa hazvigone kutenderwa kuve zvakajairika mukati mevaviri chero nguva. Hasha kushaya ruremekedzo kune mumwe munhu izvo zvisingafanire kutenderwa chero zvodini.
Zvakakosha kudimbura hukama mubhudzi kana hukasha nekupopota zvikajairika mukati mevaviri. Icho chinhu chisingafanirwe kumboitika, kunyange zvinosuruvarisa kuti zvakawanda zvinoitika kupfuura zvaungade.
Panogona kuve pasina manyepo mune humwe hukama sezvo zvikasadaro zvinoguma zvatyora kukosha kwakakosha sekuvimba. Manyepo anoita kukuvadza kukuru kune chero mudiwa uye haafanire kutenderwa chero nguva.
Kushaikwa kwekuvanzika uye nerusununguko
Vazhinji vakaroorana vanoita chikanganiso chikuru chekuonekana nekuvanzika uye nerusununguko kana zvasvika pakuvimbisana. Kuva nehukama hazvireve kuti mapato haakwanise kuva nenzvimbo yavo yega. Vaviri vane hutano vanofanirwa kuve vakasununguka kudambura uye kuita izvo zvavanofunga zvakakodzera, pamusoro pekuve nekuvanzika mune zvakasiyana zvehupenyu hwako.
Zvepabonde zvinofanirwa kunge zviri zviviri uye zvisina kumisikidzwa neimwe yemapati. Nehurombo nhasi, kuchine vakadzi vazhinji vanoiswa pasi nekushungurudzwa kana zvasvika pabonde. Muhukama hune hutano, mumwe wemapati anofanira kuremekedza nguva dzese kuti waanodanana naye haanzwe kuda kuita bonde uye ozvisiyira panguva yakakodzera.
Muchidimbu, mune vaviri kwete zvese zvinoenda uye iwe unofanirwa kuseta nhevedzano yemiganhu kuitira kuti hukama hurambe hwakasimba sezvinobvira. Vaviri vacho inyaya yevaviri uye zvakakosha kuisa nyama yese pane iyo grill navo vaviri uye kunakirwa nehumwe hutano. Pamberi pechiratidzo chero chipi chinoita kuti vaviri vacho vadzedzere, zvinodikanwa kuibvisa mubhu uye kwete kubvumira chero nguva kuti akasiyana maitiro akashata anogona kugadzikana mune vaviri vacho. Hukama hunofanirwa kunge hwakavakirwa pane hunhu hwakakosha se kuremekedza, kutaurirana kana kuvimba uye uwane chiyero chakakura mairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » 5 zvinhu zvisingabvumirwe muhukama
4 zvinyorwa uye mabhuku kuti unzwisise minimalism
How kurasikirwa nedumbu maererano nerudzi rwedumbu